गणेश लामा छुटे, लामामाथि यसरी सफाय गर्न खोजेको थियो समिरमानको समुहले | My News Nepal
काठमाडौं । रहस्यमय रुपमा हतियारसहित पक्राउ परेर सजाय भुक्तान गरिरहेका गुण्डा नाइके गणेश लामा छुटेका छन्। हतियार मुद्दामा सात महिना कैद भुक्तान गरी नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका लामा आज छुटेका हुन। गत फागुन ३० गते गौशालाको पशुपति भिजन होटलबाट हतियारसहित पक्राउ परेका लामा पूर्पक्षको लागि जेल चलान भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामालाई पूर्पक्षको लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको थियो।
के थियो गोली काण्डको रहस्य ?
पशुपति भिजन होटल अगाडि भएको गोली काण्डमा गुण्डा नाइके गणेश लामालाई लक्षित गरी गोली प्रहार भएको थियो । तर, सिसीटिभि फुटेजमा भने लामाले भुइमा खसेको पेस्तोल हातमा लिएको देखिँदा प्रहरीले लामा हतियार सहित पक्राउ परेको दाबी गर्‍यो । लामाको दरीलो मुटुको कारण गोलीले उनको छाती छुन भ्याएन । गोली पड्किएपछि भुईँसम्म खसेको पेस्तोल नियन्त्रणमा लिँदा लामा प्रहरी हिरासतमा पुगे र हात हतियार तथा खरखजना मुद्दा झेल्न बाध्य भए ।
पशुपति भिजनमा रहेको ईन्द्रेणी फिटनेस क्लवमा लामा नियमित शारीरिक व्यायमको लागि पुग्ने गर्थे । उनको आउने र जाने समय प्रायः एकै हुन्थ्यो । त्यस दिन पनि क्लवको नियमित कार्य सकाएर फर्किने क्रममा उनलाई लक्षित गरी गोली प्रहार गर्न खोजिएको थियो । लामाका अनुसार अपरचित व्यक्तिबाट खोसेको पेस्तोल आफ्नो हातबाट बरामद गरेको भन्दै प्रहरीले मुचुल्का बनाएर मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढायो ।
स्रोतका अनुसार गुण्डाको एक समुहले बिगतदेखि लामाको सफाया गर्न खोजेको थियो । लामा निकट स्रोतका अनुसार हाल कारागारमा रहेका निर्माण व्यबसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन हत्याका नाइके समिरमान बस्नेतको समुहले लामालाई सफाया गर्न खोजेका थिए । बस्नेतले कारागारबाटै सुटरलाई प्रयोग गरी लामाको हत्या गर्न लागेको लामाको परिवारले समेत आरोप लगाएको थियो ।
तत्कालिन समयमा काभ्रेका अर्का गुण्डा दावा लामामाथि गुज्जेश्वरीमा गोली प्रहार गरेको बस्नेत समुहले लामालाई समेत धम्की दिएका थिए । दावालाई गोली प्रहार गरेकै दिन नचिनेको नम्बरबाट लोप्साङ बोलको भन्दै तेरो पनि पालो आउँदैछ भनेर धम्क्याएका थिए । लामामाथि गोली प्रहार गर्ने समुहको योजना डेढ बर्ष अघिदेखि कै हो । तर, स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको चुनावको कारण लामा प्राय काभ्रेतिर व्यस्त हुन पुग्दा उक्त समुहको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।
निर्माण व्यबसायी महासंघका अध्यक्ष गौचनको हत्या पश्चात प्रहरी आक्रमक शैलीमा यो समुहको खोजिमा लागेपछि लामाको सफायाको योजना तुहिएको थियो । बस्नेत पक्राउ र र मनोज पुन ईन्काउन्टरमा मारिनु तथा एक दर्जन सहयोगी पक्राउ परेपछि प्रहरीले पनि अन्यको खोजिमा खासै चासो देखाएको छैन ।
यहि मौकामा नियमित क्लवमा आउ जाउ गर्दै आएका लामा माथि गोली प्रहारी गरी हत्याको प्रयास भएको हो । बस्नेतका खास सहयोगी लोप्साङ राई , रोशन बुढाथोकी, अम्बर राना मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खासै चासो नदेखाएको हो वा पक्राउ गर्न नसकेको हो ? जसले यस्तो प्रकरण निरन्तर आइरहेको छ । लोप्साङ बस्नेतको खास सहयोगी हुन् । बुढाथोकी समिरको दाईको साला हुन् । रानामगर सेनाका भगौंडा हुन् । जो समिरको लागि काम गर्दै आएका सुटर मानिन्छन् । जुन कुरा प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
तर, काठमाडौंका तत्कालिन एसएसपी बिश्वराज पोखरेलले गोली काण्डका वास्तविक खेलाडीको अनुसन्धान गर्न र समिरमानका सुटर पक्राउ गर्नतिर भन्दा पनि एकोहोरो गणेश लामालाई नै दोश देखाएर मिडियामा चर्चा कमाएका थिए । किनकि गणेश लामाको छबी सर्वसाधारण र मिडियामाझ कुख्यात गुण्डाको रुपमा कहलिएको थियो र उनी पक्राउ पर्दा एसएसपी, सर्बसाधारण र मिडियामाझ राम्रो कामको म्यासेज गएको थियो ।
त्यसो त लामालाई गोली प्रहार गरेको आधा घण्टा नबित्दै एक दर्जन ठेकदारलाई नचिनेको नम्बरबाट फोन आएको प्रहरीले नै वताएको थियो । नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन भने प्रायः कसैले पनि उठाएका थिएनन । तर, एक ठेकदारले भने उठाएका थिए । फोनमा आफूलाई लोप्साङको भाई बताउँदै गणेश लामा भाग्यले बचेँको भन्दै ठेकदारलाई मुख छाडेर पैसा मागेका थिए । यसअघि पनि गौचन हत्या पश्चात सयौं व्यापारी र ठेकदारलाई लोप्साङको फोन आएको थियो ।